ခရစ်စမတ်ကာလနှင့် နယူးရီးယားတွင် ထရိတ်ဒင်းအချိန်များ ပြောင်းလဲမည်.
ခရစ်စမတ်နှင့် နယူးရီးယားရှိသောကြောင့် ထိုရက်များတွင် Forexဈေးကွက်အချိန်ဇယားများ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားလိုပါသည်!
25-12-2017 နှင့် 01-01-2018 တို့တွင် ခရစ်စမတ်ကာလကြောင့် Forexဈေးကွက်များ ပိတ်မည်ဖြစ်သည်.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အချိန်အပြောင်းအလဲများစွာ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်:
25/12/2017ရက်နေ့ 00:00အချိန်တွင် ဈေးကွက်ပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး 26/12/2017ရက်နေ့ 01:00 (MT အချိန်)တွင် ဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်မည်ဖြစ်ပါသည်
01/01/2018ရက်နေ့ 00:00အချိန်တွင် ဈေးကွက်ပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး 02/01/2018ရက်နေ့ 01:00 (MT အချိန်)တွင် ဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်မည်ဖြစ်ပါသည်
ကျေးဇူးပြုပြီး မှတ်သားပေးရန်မှာ FBSအကူအညီဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအဖွဲ့အနေနှင့် ပိတ်ရက်အတွက် အောက်ပါအချိန်များတွင် ၀န်ဆောင်ပေးသွားပါမည်:
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ရက်တွင်၂၃:၀၀ (UTC +၃)အချိန်အထိဝန်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် ၂၃:၀၀အချိန်တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်. ဒီဇင်ဘာ ၃၁ရက်တွင် ၁၅:၀၀ (UTC +၃)အချိန်အထိဝန်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၁ရက် ၂၃:၀၀အချိန်တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်.
FB ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအဖွဲ့အနေနှင့် ပိတ်ရက်အတွက် အောက်ပါအချိန်များတွင် ၀န်ဆောင်ပေးသွားပါမည်:
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ရက် ၁၇:၀၀ (UTC +၃)အချိန်အထိဝန်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် ၂၃:၀၀အချိန်တွင် ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်. FBS ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအဖွဲ့အနေနှင့် ဇန်န၀ါရီ ၁ရက် ၂၃:၀၀ (UTC +၃)အချိန်တွင် ပြန်လည်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပါမည်.
အားလပ်ရက်အတွင်း ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ထရိတ်ဒင်းလုပ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်. ဈေးလှုပ်ခတ်မှု ပမာဏမှာ လွန်စွာမြင့်မားသော်လည်း အားလပ်ရက်အတွင်း ငွေဖြစ်လွယ်မှုနည်းပါးပြီး သင့်အကောင့်အတွင်း ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးငွေများလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းနိုင်စေရေးအတွက် 00:00 25.12.2017 မှ 00:00 2.1 .2018 ကာလအတွင်း DASH, LiteCoin, Ethereum, Bitcoin, BTCUSDတို့ကိုေ၇ာင်းဝယ်ရာတွင် leverageပမာဏကို ယခင် 1:3မှ 1: 2အထိ လျှော့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်.
သင်အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်အစီအစဉ်ရှိပါက ယခုအချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ကျေးဇူးပြု၍စိတ်ထဲမှတ်သားထားပါ။.